XOG: Ribery Oo Garoomada Dib Ugusoo Laaban Doona Iyo Kulanka Ugu Horreeya Ee Uu Safan Doono – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaXOG: Ribery Oo Garoomada Dib Ugusoo Laaban Doona Iyo Kulanka Ugu Horreeya Ee Uu Safan Doono
Weeraryahanka Kooxda Bayern Munich Franck Ribery ayaa shaaca ka qaaday inuu ku dhow yahay inuu dib ugu soo laabto garoomada kadib markii uu mudo dheer ka maqnaa.
Xidigan qaranka France ayaa garoomada ka maqnaa tan iyo 11-kii bishii March ee sanadkan, kadib markii dhaawac uu soo gaaray kulankii ay Bayern Munich 7-0 kaga badiysay Shakhtar Donetsk Champions League .
Si kastaba, Ribery ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda, waxaana uu sheegay inuu dhawaan heli doono fursad uu uga soo muuqdo kooxda koobaad.
“Waan isku dayi doonaa, aad ayaan uwanaagsanaa todobaadyadii lasoo dhaafay, waxaan ka shaqeynayaa xaaladeyda, waxaana rajeynayaa inaan kusoo biiro tababarka buuxa ee kooxda sida ugu dhaqsiyaha badan”ayuu yiri Ribery.
“Xiligan la joogo wax walba si wanaagsan ayay usocdaan”ayuu hadalkiisa ku daray Franc Riberey oo la weydiiyay su’aal ahayd hadii uu 15 daqiiqo ciyaari karo kulanka ay kooxdiisa da’yarteeda la ciyaareyso Ingolstadt waxaana uu yiri: “waan rajeynayaa inaan daqiiqado ciyaaro, haa, anqawgeyga si wanaagsan ayuu haatan dareemayaa”.
“Si adag ayaan ushaqeeyay isniintii, talaadadii iyo arbacadii, waxaana sameeyay tijaabo badan waxaana dareemayaa inaan wanaagsanahay.”ayuu hadalkiisa ku daray xidigan ku guuleystay ciyaaryahanka sanadka ee Yurub.
Ciyaaryahanada kooxda Bayern Munich ayaa jeclaan lahaa iney dib u arkaan Frank Ribery oo mar kale garoomada dib ugu soo laabanaya.